Askar Lagu Dilay Gudaha Iyo Duleedka Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Askar Lagu Dilay Gudaha Iyo Duleedka Magaalada Muqdisho.
Rag hubeysan waxey agagaarka Isgoyska Baar-ubax ee degmada Wardhiigley ku dileen askari ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada,waxeyna ragga hubeysan askarigan ka toogteen qeybaha sare ee jirka taasi oo sababtay in askariga isla goobta ku qurbaxo.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo fuliyay dilkan waxey sidoo kale horay usii qaateen Qori uu ku hubeysanaay askarigan ay ku dileen agagaarka Isgoyska Baar-ubax ee magaaladan Muqdisho.
Sidoo kale ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey askari ka tirsan maamulka Murtad Farmaajo ku dileen Xaafada Daaru-salam ee duleedka magaalada Muqdisho kaasi oo sidoo kale laga toogtay qeybaha sare ee jirka.
Dilalkan ka kala dhacay gudaha iyo duleedka magaalada Muqdisho waxey kusoo aadayaan xilli habeen hore ciidamada Shabaabul Mujaahdiin dagaal culus ay ku qaadeen saldhiga ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ka sameysteen Xerada Maslax ee duleedka Xaafada Suuqa Xoolaha degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho.
Laaya murtadiinta kufaarta wehelka Ka dhigtay allah ayaa garabkiina ah mujaahidiineey sugnaada guusha waa dhankiina insha allah